Ipuleti Elingenalutho Chassis China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ipuleti Elingenalutho Chassis - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 21 ye-Ipuleti Elingenalutho Chassis)
I-CNC aluminium chassis ipuleti yemoto ye-RC
IHobbycarbon CNC i-aluminium chassis ipuleti yemoto ye-RC I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machined, se-carbon fiber CNC yokusika insiza kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. Izingxenye ze-Aluminium ze-CNC inqubo yokukhiqiza efezwa ngokucindezela okukhulu...
Hobbycarbon 1000X1500X4.0mm 3K twill matte carbon fiber plate I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machined, se-carbon fiber CNC yokusika insiza kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. I-CNC Carbon Fibre ukusika kuyindlela ekhethekile yokusiza amakhasimende...
I-Carbon Fiber yaqinisa ipuleti yepulasitiki ye-FRP
I-Hobbycarbon carbon fiber plate Ubukhulu balolu hlobo lukaphebula we-carbon fiber ngu- 400x500mm . Isebenzisa i-100% yekhabhoni fiber fiber ukwenza. Eminyakeni yamuva, amapuleti e-carbon fiber adume kakhulu ku-RC. Futhi, sinamapuleti engilazi ekhabhoni kanye namapuleti engilazi e-fiber. Insiza ye-OEM ne-ODM...
ipuleti le-carbon cnc eligcwele yokusika i-RC
I-100% 3k carbon fiber cnc yokusika ipuleti yeRC Inzuzo yeplate yeCarbon Fibre : 1. Amandla aphezulu, isisindo esikhanyayo 2. Corrosion Resistant, impilo ende ukusetshenziswa 3. I-Smooth, matt finish, glossy kumaliza 4. Amafektha athengise ngokuqondile, intengo yokuncintisana I-5.Aplication: i-rc UAV / i-drone...
I-3K Real carbon fiber cnc yokusika ipuleti
I-3K eshisayo eshisayo ethengisa i-carbon fiber cnc cut plate Sisekela Ishidi le-Carbon Fibre egcwele, Ishidi le-Carbon Glass, Ishidi le-G10 Glass Fibre, iphepha lekhabhoni enombala, zonke izingqimba ze-carbon 3 sheet, iphepha le-quasi-isotropic . Sine-Carbon Sheets eminingi Egcwele esitokisini, sisekela insiza ye-CNC...
I-audi aluminium chassis eyenziwe ngokwezifiso ekhanda ithoyizi le-RC
Hobbycarbon egcizelele audius aluminium chassis intaba for RC ithoyizi I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machined, se-carbon fiber CNC yokusika insiza kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. Izingxenye ze-Aluminium ze-CNC inqubo yokukhiqiza efezwa...
i-qav-r i-carbon fiber ephansi ipuleti v2
ishidi le-carbon fiber acrylic Incazelo Yomkhiqizo: Ishidi lethu le-carbon fiber elingafaki okuqukethwe okungcolile . Usayizi wethu ojwayelekile ngu-400x500mm / 500x600mm futhi sinobukhulu be-0.5-7.0 mm
carbon fiber ilayisensi ipuleti ngesithuthuthu
carbon fiber ilayisensi ipuleti ngesithuthuthu Ngokuvamile, sidinga izinyathelo ezimbili zokwenza umkhiqizo we-carbon fiber. I-1.make i-carbon fiber plate ephelele ye-2.CNC ukusika Uma ufuna ukwenza ngezifiso, ama-pls asithumela umdwebo. Incazelo Yomkhiqizo: Indwangu: 3K Full Carbon
carbon fiber ilayisensi ipuleti Uhlaka 4 hole Sine-3k twill matte / 3k twill glossy / 3k plain matte / 3k ethafeni glossy.Among, ipuleti le-matte le-twill lithengiswe okuhle kakhulu. Uma kuqhathaniswa ne-twill matte, ipuleti ecwebezelayo kulula ukusatshalaliswa. Incazelo Yomkhiqizo: Indwangu: 3K Full Carbon Fibre...
I-Carbon Fibre 2mm 3mm Ipuleti engu-4mm kaboni
I-Carbon Fibre 2mm 3mm Ipuleti engu-4mm kaboni Ubukhulu balolu hlobo lukaphebula we-carbon fiber ngu-500x600mm. Isebenzisa i-100% yekhabhoni fiber fiber ukwenza. Eminyakeni yamuva, amapuleti e-carbon fiber adume kakhulu ku-RC. Futhi, sinamapuleti engilazi ekhabhoni kanye namapuleti engilazi e-fiber. Insiza ye-OEM...
I-G10 Glass Fiber Board eyenziwe ngokwezifiso / Ishidi / ipuleti
I-Laminate fr4 Epoxy G10 Ingilazi le-Glass Sheet Material Incazelo Yomkhiqizo I-G10 glass fiber Sheet , eyaziwa nangokuthi ishidi lokufaka , ishidi le- G10 fiberglass , nephepha le-Epoxy, lenziwa ngendwangu ye-E-ingilazi engenayo i-alkali efakwe ngama-epoxy resins ngokusebenza ngaphansi kokushisa nokucindezela. Ishidi...
Ipuleti Elingenalutho Chassis Ipuleti le-Audi Chassis Ipuleti Elicwengekileyo Le-Carbon Fibre Amapuleti Chassis Uk Ipuleti le-Super Carbon Glass Ipuleti Eliphezulu leMatte Ipuleti le-G10 ingilazi Ipuleti elihlanganisiwe / ishidi